” ညီမ VOTE လိုချင်တုန်းကဘယ်သူတွေဆီကဘယ်လိုတောင်းခဲ့သလဲ?” လို့ ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး….. – Cele Snap
” ညီမ VOTE လိုချင်တုန်းကဘယ်သူတွေဆီကဘယ်လိုတောင်းခဲ့သလဲ?” လို့ ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး…..
အလှမယ် တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟန်သီကို ” ညီမ Vote လိုချင်တုန်းက ပြည်သူတွေဆီ ဘယ်လိုတောင်းခဲ့လဲ?” လို့ ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တဦး…
အလှမယ် ဟန်တီသို့ …
ဒီစာကို ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကင်းစွာဖြင့်ရေးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် personal attack မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရင်သိစေအပ်ပါတယ်။ညီမ အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကနေနေ ၊ ဘာရေးရေးမရေးရေး ညီမရဲ့ rights လို့ပြောတယ်နော် ၊ အဲ့စကားက ညီမသာ ဈေးထဲက ဟင်းရွက်ကန်စွန်းရောင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့ မှန်တာပေါ့။
အခုညီမက မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်လေ ညီမရဲ့အသံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသံဖြစ်တယ်၊ ညီမရဲ့ ရပ် တည်မှု ဖေးမမှုဟာ နိုင်ငံရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှာ ဈေးထဲက ဟင်းရွက်ကန်စွန်းသည်တောင် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် မကြောက်မရွံ့မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်တယ်။ အမှားဘက်က မရပ်တည်ဘူး ကြားနေမလုပ်ဘူး အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြောရဲကြတယ်။
ညီမကတော့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်ဖြစ်ပြီး ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေပြီးမှ ဒါ ကျမရဲ့ right မို့ ကျမပြောချင်ပြောမယ် မပြောချင်မပြောဘူး ဒါကျမအ ခွင့်အရေးလို့ ပြောတာ ညီမမရှက်ဘူးလား ? ညီမသွားပြိုင်တုန်းက vote ပေးထားတဲ့ ဝန်းရံပေးထားတဲ့ ပြည်သူတွေကို အားမနာဘူးလား ?
ညီမ vote လိုချင်နေတုန်းက ပြည်သူကိုဘယ်လိုတောင်းခဲ့လဲ ? အခုပြည်သူက ညီမတို့ အလှမယ်တွေရဲ့ အသံကိုလိုအပ်နေချိန်မှာ ခုလိုပြောထွက်တာ ညီမကိုယ်ညီမ လိပ်ပြာလုံရဲ့လား ?အကိုကတော့ ဒီနေ့ကစပြီး ညီမကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်အဖြစ်လုံးဝ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ေ တာ့ပါဘူး။ဒါ ညီမပြောတဲ့ အကို့ rights ပါပဲ။
အလှမယျ တယောကျဖွဈတဲ့ ဟနျသီကို ” ညီမ Vote လိုခငျြတုနျးက ပွညျသူတှဆေီ ဘယျလိုတောငျးခဲ့လဲ?” လို့ ဒဲ့မေးလိုကျတဲ့ ပရိတျသတျတဦး…
အလှမယျ ဟနျတီသို့ …
ဒီစာကို ခဈြခွငျးမုနျးခွငျးကငျးစှာဖွငျ့ရေးပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ personal attack မဟုတျဘူးဆိုတာ အရငျသိစအေပျပါတယျ။ညီမ အနနေဲ့ ဘယျဘကျကနနေေ ၊ ဘာရေးရေးမရေးရေး ညီမရဲ့ rights လို့ပွောတယျနျော ၊ အဲ့စကားက ညီမသာ ဈေးထဲက ဟငျးရှကျကနျစှနျးရောငျးတဲ့သူဆိုရငျတော့ မှနျတာပေါ့။
အခုညီမက မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားပွုအလှမယျလေ ညီမရဲ့အသံဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အသံဖွဈတယျ၊ ညီမရဲ့ ရပျ တညျမှု ဖေးမမှုဟာ နိုငျငံရဲ့ခှနျအားဖွဈတယျ။အခုအခြိနျမှာ ဈေးထဲက ဟငျးရှကျကနျစှနျးသညျတောငျ ကိုယျ့နိုငျငံအတှကျ မကွောကျမရှံ့မားမားမတျမတျရပျတညျတယျ။ အမှားဘကျက မရပျတညျဘူး ကွားနမေလုပျဘူး အမှနျကို ဖျောထုတျပွောရဲကွတယျ။
ညီမကတော့ နိုငျငံကိုယျစားပွုအလှမယျဖွဈပွီး ရငေုံနှုတျပိတျနပွေီးမှ ဒါ ကမြရဲ့ right မို့ ကမြပွောခငျြပွောမယျ မပွောခငျြမပွောဘူး ဒါကမြအ ခှငျ့အရေးလို့ ပွောတာ ညီမမရှကျဘူးလား ? ညီမသှားပွိုငျတုနျးက vote ပေးထားတဲ့ ဝနျးရံပေးထားတဲ့ ပွညျသူတှကေို အားမနာဘူးလား ?
ညီမ vote လိုခငျြနတေုနျးက ပွညျသူကိုဘယျလိုတောငျးခဲ့လဲ ? အခုပွညျသူက ညီမတို့ အလှမယျတှရေဲ့ အသံကိုလိုအပျနခြေိနျမှာ ခုလိုပွောထှကျတာ ညီမကိုယျညီမ လိပျပွာလုံရဲ့လား ?အကိုကတော့ ဒီနကေ့စပွီး ညီမကို မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားပွုအလှမယျအဖွဈလုံးဝ အသိအမှတျမပွုနိုငျေ တာ့ပါဘူး။ဒါ ညီမပွောတဲ့ အကို့ rights ပါပဲ။